Ny talata antoandro tamin’ny 11ora sy sasany teo no nitrangan’ny fanafihana, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena Ankadilalana. Tsy nahetsika ilay vehivavy mpivarotra noho ny tahotra ny ainy ka nanome tsy sazoka ireo tahirim-bola rehetra teo am-pelatanany izay haterina ho vidin’entana tany amin’ny mpambongady. Araka ny voalazan’ny lasibatra, tsy misy fantatra ireo malaso nandroba ny volany. Efa lasa ela izy ireo vao nampandre ny mpitandro ny filaminana ilay renim-pianakaviana sy ny manodidina. Efa nanjavona anefa ireo tsy mataho-tody niaraka amin’ny vola be ka tsy tratra intsony. Ny zandarimariam-pirenena ao Andoharanofotsy no mandray an-tanana ny raharaha sy ny tohin’ny fanadihadiana. Karohina koa ny mpiray tsikombakomba tamin’ireo olon-dratsy izay heverina fa loharanom-baovaon’ny fisian’izao vola be izao.